पाँच सय विगाह धान खेतमा खोला ः खै के खाएर बाँच्ने ? « Loktantrapost
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार १२:१४
बाढीले बगाएको धान खेत देखाउँदै स्थानीय तालु ताजपुरिया ।
झापा,४ कात्तिक । गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर–२ भाकुरमाडी वस्तीमा पसेको पानी र हिलो अझै सुकेको छैन । धानका कुन्यू मिलाएजस्तै लहरै माटो र टाटीले जस्ता पाता च्यापेर बनाएको घरहरुको आँगनदेखि ओछ्यानसम्मै छिपछिप्पे हिलो र पानी छ । तर, त्यहाँका बासिन्दालाई घरभन्दा पनि पाँक्न लागेको धानखेतमा खोलो कुँदेपछि अब के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्ता छ ।
वस्तीकी ६५ बर्षीया तालु ताजपुरिया घरदेखि दुईसय मिटरमा रहेको खोला पारितिर देखाउँदै भन्छिन् “ऊ त्यहाँ मेरो खेतमा धान पहेंलपुर थियो । दशैं सकिएपछि काटौला भन्दाभन्दै खोलाले सबै लगिदियो । अब के खाएर बाँच्नु ।” उनको चार विगाह जमिनमा धान खेती थियो ।
कनकाई नदी र किस्ने खोलाको बीचमा रहेको भाकुरमाडीमा ४३ घर परिवार ताजपुरिया जातिको बसोवास छ । खोला किनारमा खेती र गाईवस्तु पालेर जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरुलाई आज कनकाई खोलाको बाढीले विस्थापित बनाएको भन्दा पनि पाँकेको धान खोलाले बगाएपछि आत्तिएका छन् ।
सोही वस्तीकी ४८ बर्षीया आनन्दी ताजपुरियाको तीन विगाह जमिनमा लगाएको धानखेतमा खोला कुदिरहेको छ । वस्तीको पारिपटी अर्थात भारतको विहार प्रान्तको कञ्चपुरसँग सीमा जोडिएको स्थानमा उनीहरुले धान खेती गर्दै आएका थिए । प्रत्येक परिवारको १० कठ्ठादेखि पाँच विगाहसम्म खेती थियो । करिब १५० विगाहमा लगाएको धान खेतमा कनकाई खोला बगिरहेको छ । उनीहरुले बासमति, भाले शर्ना, गरिमा जातका धानखेती गरेका थिए ।
बाढीले धान खेत बगाएपछि स्थलगत अनुगमनमा कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख निलकमल सिंहसहितको टोली ।
वडा नम्बर १ स्थित रंगियाथान वस्तीका ६८ बर्षीय सत्यनारायण राजवंशीले कात्तिक महिनामा यस्त्रो ठूलो खोलामा बाढी आएको पहिलोपटक भएको बताइन् । “यति ठूलो बाढी त असार साउनमा पनि आएको थाहा छैन”, उनले भने, “बेला न कुबेलाको बाढीले किसानको धान खेत सबै लग्यो अब भोकभोकै मर्ने भयौं ।”
बेमौसमी बर्षाका कारण जिल्लाका अन्य पालिकामा भन्दा बढी बाढीले विस्थापित हुने गौरीगञ्ज गाउँपालिकामै छन् भने धानखेत पूर्णमा गुमाउने पनि यही रहेको पालिकाका अध्यक्ष बाबुराज श्रेष्ठले बताए । उनले सयौं किसानको पाँक्न लागेको धान मात्र होइन जमिनमाथि नै खोला कुदिरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वडा नम्बर २ भाकुरमाडीका किसानको १५० विगाह, वडा नम्बर १ स्थित धानगाढाका किसानको १०० विगाह, होक्लाबाडीको ६० विगाह, विर्खेवस्तीको ६० विगाह,रंगियाथानको १०० विगाह, बालुवाडी भन्सार चोकको ५० विगाह गरी करिब ५२० विगाह भन्दा बढी जमिनको धान खोलाले बगाएको बताए ।
उनले प्रकृतिकोपको कारण पालिकाले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको जानकारी दिँदै भने, “यहाँ भोकमरि लाग्ने अवस्था आयो अब । स्थानीयपालिकाले मात्र सबै क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्दैन । तीनै तहको सरकार मिलेर उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुको विकल्प छैन ।” उनले पालिकाको विपद कोषमा रु. ५० लाख रहेको जानकारी दिए । तर यस्तो विपदको भयाभव अवस्थामा यतिले मात्र नपुग्ने हुँदा तीनै तहको सरकारको दात्यिव उत्तिकै हुने उनको भनाई छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले सोही क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन बुधबारै गरिसकेको छ । केन्द्रका प्रमुख निलकमल सिंहले क्षतिको विवरण कृषि मन्त्रालयमा पठाएर क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने उनीहरुलाई आश्वसन दिएका छन् । उनले जिल्लाका अन्य स्थानमा पानीले धान ढाल्ने र डुबाउने गरे पनि गौरीगञ्जका केही वडामा पूर्ण रुपमा धानखेतीमा खोलाले क्षति पुर्याएको बताए ।